လက်စားချေမယ့် ချဲလ်ဆီး ၊ နိုင်ပွဲကိုယ်စီရမယ့် မန်ချက်စတာတို့နဲ့ . . . EPL Week 37 အတွက် ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်များ – Sport Gaber
ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးပါတော့မယ် ။ ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ့် အသင်း ၊ တန်းဆင်းရမယ့် အသင်းတွေ အဖြေပေါ်သွားပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်မယ့် အသင်းတွေရဲ့ အမှားမခံ ပွဲစဉ်တွေ ကျန်ရှိ ပါသေးတယ် ။ ကြားရက်မှာ ကစားမယ့် ပွဲစဉ် 37 မှာတော့ အဆင့် ၃ နဲ့ ၄ က လက်စတာ နဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ကြမှာပါ ။
ဒီပွဲက ဘယ်လိုရလဒ် ထွက်ပေါ် လာမလဲ ၊ ဒီတွေ့ဆံမှုကို အဆင့် ၅ က လီဗာပူး အမိအရ ဆုပ်ကိုင် နိုင်မလား ဆိုတာကို Sky Sports သတင်း ဌာန ရဲ့ တင်ဆက်သူ လူးဝစ် ဂျုံးစ် က အခုလို ခန့်မှန်း သုံးသပ် သွားခဲ့ ပါတယ်
၁ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် – ဖူလ်ဟမ်
အိမ်ကွင်း ၂ ပွဲဆက် ရှုံးနိမ့်အပြီးမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်တို့ နိုးထဖို့ အချိန် ကျရောက် လာပါပြီ ။ ရာသီကို အဆင့် ၂ နေရာ နဲ့ ပိတ်သိမ်းချင်တယ်လို့ ဆိုးရှား ပြောထားတာရယ် ၊ ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ပြန် ကစားရမှာတွေရယ်ကြောင့် ဒီပွဲကို ယူနိုက်တက်တို့ အနိုင်ရအောင် ကစား သွားမှာပါ ။ ယူရိုပါလိဂ် ဖိုင်နယ် ရှိနေ သေးပေမယ့် ပွဲစဉ် ၃၈ မှသာ အနားပေးဖို့ စိတ်ကူးမယ့် ပုံပါပဲ ။ ယူနိုက်တက်တို့ အနိုင် ရလဒ်ကို ပြန်ရှာတွေ့ မယ့်ပွဲပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၂ – ၁ ဖူလ်ဟမ်
၂ ။ ဘရိုက်တန် – မန်စီးတီး
မန်စီးတီးတို့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် အတွက်ပဲ စိတ်ကူးနေမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အနေအထားမျိုးကိုတောင်မှ ဘရိုက်တန် တို့ အနိုင် ကစားဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး ။ အဓိက တိုက်စစ်မှူး မူပေး ပွဲပယ် ခံထားရတာကြောင့်လည်း မန်စီးတီး ခံစစ်ကို ချိုးဖျက်ဖို့ ခက်ခဲမှာပါ ။ ဂွာဒီယိုလာ ကတော့ အမာခံတွေကို အနားပေးနိုင်သလောက် အနားပေး သွားမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် အရန်လူနဲ့လည်း လုံလောက်ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – ဘရိုက်တန် ၁ – ၂ မန်စီးတီး
၃ ။ ချဲလ်ဆီး – လက်စတာ
တစ်ပတ် အတွင်း လက်စတာ ကို ၂ ကြိမ် ဆက်တိုက် ရှုံးပြီး ဖလား ၁ လုံး နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် တစ်နေရာ ကို လက်လွှတ်ရလောက်အောင် ချဲလ်ဆီးတို့ မမိုက်မဲ နိုင်ပါဘူး ။ လက်စတာ နဲ့ ပွဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ဂိုးပေး လိုက်ရပြီး ရှုံးခဲ့ရပေမယ့် ချဲလ်ဆီး တို့ အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီပွဲကတော့ သူတို့ လက်စား ပြန်ချေမယ့် ပွဲပါ ။ FA Cup က အရှုံးအတွက် ချဲလ်ဆီးတို့ ဒီပွဲကို ဖလားလုပွဲ တစ်ခုလို ကစားပါလိမ့်မယ် ။ သူတို့ အနိုင်ပြန်ယူ သွားမှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – ချဲလ်ဆီး ၂ – ၀ လက်စတာ
၄ ။ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး – အက်စတွန် ဗီလာ
ဥရောပ ဝင်ခွင့် မျှော်လင့်ချက် ယဲ့ယဲ့အတွက် စပါးတို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ရပါတော့မယ် ။ နောက်ဆုံး ပွဲမှာ လက်စတာ နဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်လို့ ဒီပွဲကို နိုင်ထားမှသာ အလားအလာ ကောင်းနေမှာပါ ။ ဗီလာ က အမှတ် မလိုတော့တဲ့ အတွက် စပါးတို့ အနိုင် ရသွားနိုင်ပါတယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – စပါး ၂ – ၁ ဗီလာ
၅ ။ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် – အာဆင်နယ်
ဘာမှ မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်တဲ့ အသင်း ၂ သင်း ကစားကြမှာပါ ။ ဒါကြောင့် ပွဲကို စိတ်လွတ် လက်လွတ် ကစားနိုင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ လန်ဒန် မြို့ခံချင်း ဖြစ်တာကြောင့် အလျော့ပေးဖို့တော့ စိတ်ကူး ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပဲလေ့စ် ဘက်မှာ လူကောင်းတွေ ရှိသလို အာဆင်နယ် ဘက်မှာလည်း ဂိုးသွင်း ကောင်းသူတွေ ရှိကြပါတယ် ။ ရလဒ်က အရေးမပါပေမယ့် ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းမှာပါ ။
ခန့်မှန်းချက် – ပဲလေ့စ် ၃ – ၂ အာဆင်နယ်
၆ ။ ဘန်လေ – လီဗာပူး
လက်စတာ နဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့ ဆုံတွေ့မှုကို လီဗာပူးတို့ အခွင့်ကောင်း ယူနိုင်ပါ့မလား ? ဝက်စ်ဘရွန်း နဲ့ ပွဲတုန်းက ခြေမျိုး ဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ ။ ဘန်လေ က ဝက်စ်ဘရွန်း ထက် ကစားပုံ ပိုကောင်းပြီး ကာယပိုင်း ကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး စာရင်းဝင်ပါတယ် ။
လီဗာပူး ဘက်မှာ မိုဆာလာ ဂိုးသွင်း ပေးနေပေမယ့် ခံစစ်က အခုထိ ယိုယွင်း နေဆဲပါ ။ ဝက်စ်ဘရွန်း နဲ့ ပွဲမှာ နောက်ဆုံး မိနစ်မှ အဲလစ်ဆွန် ဘက်ကာ ရဲ့ အံ့ဖွယ် ခေါင်းတိုက်ဂိုးနဲ့ နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒါမျိုးကို အမြဲတမ်း မျှော်လင့်လို့ မရနိုင်ပါဘူး ။
ခန့်မှန်းချက် – ဘန်လေ ၁ – ၁ လီဗာပူး
၇ ။ ဆောက်သမ်တန် ၂ – ၂ လိဒ် ယူနိုက်တက်
၈ ။ အဲဗာတန် ၁ – ၂ ဝုဗ်
၉ ။ နယူးကာဆယ် ၂ – ၀ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက်
၁၀ ။ ဝက်စ်ဘရွန်း ၁ – ၁ ဝက်စ်ဟမ်း
ပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျပှဲကွီး ပွီးဆုံးပါတော့မယျ ။ ခနြျပီယံ ဖွဈမယ့ျ အသငျး ၊ တနျးဆငျးရမယ့ျ အသငျးတှေ အဖွပေေါျသှားပွီး ဖွဈပမေယ့ျ ခနြျပီယံလိဂျ ဝငျခှင့ျအတှကျ တိုကျပှဲဝငျမယ့ျ အသငျးတှရေဲ့ အမှားမခံ ပှဲစဉျတှေ ကနြျရှိ ပါသေးတယျ ။ ကွားရကျမှာ ကစားမယ့ျ ပှဲစဉျ 37 မှာတော့ အဆင့ျ ၃ နဲ့ ၄ က လကျစတာ နဲ့ ခြဲလျဆီးတို့ ထိပျတိုကျတှေ့ဆုံ ကွမှာပါ ။
ဒီပှဲက ဘယျလိုရလဒျ ထှကျပေါျ လာမလဲ ၊ ဒီတှေ့ဆံမှုကို အဆင့ျ ၅ က လီဗာပူး အမိအရ ဆုပျကိုငျ နိုငျမလား ဆိုတာကို Sky Sports သတငျး ဌာန ရဲ့ တငျဆကျသူ လူးဝဈ ဂြုံးဈ က အခုလို ခန့ျမှနျး သုံးသပျ သှားခဲ့ ပါတယျ
၁ ။ မနျခကြျစတာ ယူနိုကျတကျ – ဖူလျဟမျ
အိမျကှငျး ၂ ပှဲဆကျ ရှုံးနိမ့ျအပွီးမှာ မနျခကြျစတာ ယူနိုကျတကျတို့ နိုးထဖို့ အခြိနျ ကရြောကျ လာပါပွီ ။ ရာသီကို အဆင့ျ ၂ နရော နဲ့ ပိတျသိမျးခငြျတယျလို့ ဆိုးရှား ပွောထားတာရယျ ၊ ပရိသတျတှေ ရှေ့မှာ ပွနျ ကစားရမှာတှရေယျကွောင့ျ ဒီပှဲကို ယူနိုကျတကျတို့ အနိုငျရအောငျ ကစား သှားမှာပါ ။ ယူရိုပါလိဂျ ဖိုငျနယျ ရှိနေ သေးပမေယ့ျ ပှဲစဉျ ၃၈ မှသာ အနားပေးဖို့ စိတျကူးမယ့ျ ပုံပါပဲ ။ ယူနိုကျတကျတို့ အနိုငျ ရလဒျကို ပွနျရှာတှေ့ မယ့ျပှဲပါ ။
ခန့ျမှနျးခကြျ – မနျခကြျစတာ ယူနိုကျတကျ ၂ – ၁ ဖူလျဟမျ
၂ ။ ဘရိုကျတနျ – မနျစီးတီး
မနျစီးတီးတို့ ခနြျပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျ အတှကျပဲ စိတျကူးနမှောပါ ။ ဒါပမေယ့ျ ဒီလို အနအေထားမြိုးကိုတောငျမှ ဘရိုကျတနျ တို့ အနိုငျ ကစားဖို့ မလှယျကူပါဘူး ။ အဓိက တိုကျစဈမှူး မူပေး ပှဲပယျ ခံထားရတာကွောင့ျလညျး မနျစီးတီး ခံစဈကို ခြိုးဖကြျဖို့ ခကျခဲမှာပါ ။ ဂှာဒီယိုလာ ကတော့ အမာခံတှကေို အနားပေးနိုငျသလောကျ အနားပေး သှားမှာပါ ။ ဒါပမေယ့ျ အရနျလူနဲ့လညျး လုံလောကျပါတယျ ။
ခန့ျမှနျးခကြျ – ဘရိုကျတနျ ၁ – ၂ မနျစီးတီး
၃ ။ ခြဲလျဆီး – လကျစတာ
တဈပတျ အတှငျး လကျစတာ ကို ၂ ကွိမျ ဆကျတိုကျ ရှုံးပွီး ဖလား ၁ လုံး နဲ့ ခနြျပီယံလိဂျ ဝငျခှင့ျ တဈနရော ကို လကျလှှတျရလောကျအောငျ ခြဲလျဆီးတို့ မမိုကျမဲ နိုငျပါဘူး ။ လကျစတာ နဲ့ ပှဲမှာ မထငျမှတျဘဲ ဂိုးပေး လိုကျရပွီး ရှုံးခဲ့ရပမေယ့ျ ခြဲလျဆီး တို့ အခှင့ျအရေးတှေ ရခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီပှဲကတော့ သူတို့ လကျစား ပွနျခြမေယ့ျ ပှဲပါ ။ FA Cup က အရှုံးအတှကျ ခြဲလျဆီးတို့ ဒီပှဲကို ဖလားလုပှဲ တဈခုလို ကစားပါလိမ့ျမယျ ။ သူတို့ အနိုငျပွနျယူ သှားမှာပါ ။
ခန့ျမှနျးခကြျ – ခြဲလျဆီး ၂ – ၀ လကျစတာ
၄ ။ တော့တငျဟမျ ဟော့စပါး – အကျစတှနျ ဗီလာ
ဥရောပ ဝငျခှင့ျ မြှောျလင့ျခကြျ ယဲ့ယဲ့အတှကျ စပါးတို့ အစှမျးကုနျ ကွိုးစား ရပါတော့မယျ ။ နောကျဆုံး ပှဲမှာ လကျစတာ နဲ့ ကစားရမှာ ဖွဈလို့ ဒီပှဲကို နိုငျထားမှသာ အလားအလာ ကောငျးနမှောပါ ။ ဗီလာ က အမှတျ မလိုတော့တဲ့ အတှကျ စပါးတို့ အနိုငျ ရသှားနိုငျပါတယျ ။
ခန့ျမှနျးခကြျ – စပါး ၂ – ၁ ဗီလာ
၅ ။ ခရစ်စတယျပဲလေ့ဈ – အာဆငျနယျ
ဘာမှ မြှောျလင့ျလို့ မရနိုငျတဲ့ အသငျး ၂ သငျး ကစားကွမှာပါ ။ ဒါကွောင့ျ ပှဲကို စိတျလှတျ လကျလှတျ ကစားနိုငျပွီး ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ ပှဲ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ ။ လနျဒနျ မွို့ခံခငြျး ဖွဈတာကွောင့ျ အလြော့ပေးဖို့တော့ စိတျကူး ကွမှာ မဟုတျပါဘူး ။ ပဲလေ့ဈ ဘကျမှာ လူကောငျးတှေ ရှိသလို အာဆငျနယျ ဘကျမှာလညျး ဂိုးသှငျး ကောငျးသူတှေ ရှိကွပါတယျ ။ ရလဒျက အရေးမပါပမေယ့ျ ပှဲကတော့ ကွည့ျကောငျးမှာပါ ။
ခန့ျမှနျးခကြျ – ပဲလေ့ဈ ၃ – ၂ အာဆငျနယျ
၆ ။ ဘနျလေ – လီဗာပူး
လကျစတာ နဲ့ ခြဲလျဆီး တို့ ဆုံတှေ့မှုကို လီဗာပူးတို့ အခှင့ျကောငျး ယူနိုငျပါ့မလား ? ဝကျဈဘရှနျး နဲ့ ပှဲတုနျးက ခွမြေိုး ဆိုရငျတော့ မဖွဈနိုငျဘူး လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ ။ ဘနျလေ က ဝကျဈဘရှနျး ထကျ ကစားပုံ ပိုကောငျးပွီး ကာယပိုငျး ကလညျး ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ အကောငျးဆုံး စာရငျးဝငျပါတယျ ။
လီဗာပူး ဘကျမှာ မိုဆာလာ ဂိုးသှငျး ပေးနပေမေယ့ျ ခံစဈက အခုထိ ယိုယှငျး နဆေဲပါ ။ ဝကျဈဘရှနျး နဲ့ ပှဲမှာ နောကျဆုံး မိနဈမှ အဲလဈဆှနျ ဘကျကာ ရဲ့ အံ့ဖှယျ ခေါငျးတိုကျဂိုးနဲ့ နိုငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဒါမြိုးကို အမွဲတမျး မြှောျလင့ျလို့ မရနိုငျပါဘူး ။
ခန့ျမှနျးခကြျ – ဘနျလေ ၁ – ၁ လီဗာပူး
အခွားပှဲစဉျ ခန့ျမှနျးမှုမြား –
၇ ။ ဆောကျသမျတနျ ၂ – ၂ လိဒျ ယူနိုကျတကျ
၈ ။ အဲဗာတနျ ၁ – ၂ ဝုဗျ
၉ ။ နယူးကာဆယျ ၂ – ၀ ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ
၁၀ ။ ဝကျဈဘရှနျး ၁ – ၁ ဝကျဈဟမျး